हुम्ला जहाज दुर्घटनाः कसरी भयो दुर्घटना ? प्रत्यक्षदर्शीको भनाई… – mero sathi tv
On १२ मंसिर २०७४, मंगलवार ०९:४६
हुम्लाको सिमिकोटमा आज विहान तारा एयरको जहाज दुर्घटना भएको छ । सिमिकोटबाट सुर्खेत उडान भर्ने क्रममा ९ एनएबीएम कल साइन भएको जहाज धावनमार्गबाट चिप्लिएर दुर्घटना भएको हो ।
दुर्घटनाबाट जहाजको अगाडि भागमा क्षति पुगेको छ भने पाइलट बसन्त लामा, सहचालक अमित गुरुंग, परिचालिका श्रेया श्रेष्ठसहित ७ जना घाइते भएका छन् । चालक दलका तीन जना र १३ जना यात्रु रहेको जहाज सुर्खेत जाँदै थियो ।
जहाजमा चुनाव सकेर फर्कंदै गरेका नेपाल प्रहरीका सई चित्रबहादुर विष्ट, सई किशोर ऐडी, प्रहरी जवान यामप्रसाद दाहाल र हस्तबहादुर सिंह घाइते भएका छन् । घाइते प्रहरीलाई हेलिकप्टरबाट नेपालगञ्ज पठाइएको छ ।
कसरी भयो जहाज दुर्घटना ?
घटनाका प्रत्यक्षदर्शी एवं विमानस्थलमा रहेको सेनाको नयाँ भैरवी दल गुल्मका गुल्मपती कमल केसीका अनुसार सिमकोटबाट सुर्खेतका लागि उड्ने क्रममा बायाँ साइडको टायर पन्चर भएपछि जहाज विमानस्थलको दक्षिणी भागमा दुर्घटना भएको हो ।
यात्रु भरेर सुर्खेतका लागि टेकअफ रनिङ भइसकेको जहाजको एकसय मिटर अगाडि बढिसकेपछि टायर पन्चर भएको थियो । पन्चर भएपछि पाइलटले एयरपोर्ट कै तीन ठाउँमा ब्रेक लगाउन खोजेका थिए । तर जहाज नरोकिएको केसीले बताए । ‘त्यसपछि जहाज डेढसय मिटर अगाडि हुत्तिएर एयरपोर्टको दक्षिणी भागको भिरालोमा पुग्यो र फेरि जहाज पश्चिम फर्किएर रोकियो,’ उनले भने ।
दुर्घटनास्थलबाट ५ मिटरको दुरीमा स्थानीयको घर रहेको छ । घरमा मानिसहरु घाम तापेर बसिरहेका थिए । जहाज आफूतिर आएपछि स्थानीयहरु समेत भागेका थिए ।
दुर्घटनाबाट जहाजको ककपिट पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ । जहाजको तीन वटै टायर र दायाँ पखेटामा केही क्षति पुगेको छ ।